30 Jiona 2020 - FJKM Québec - Canada
30 Jiona 2020
29 juin 2020 by FJKM-QUEBEC
Mihavàna ao amin’ny Tompo
JAKOBA 3 : 13-18
3:13 Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin’ny fitondrantena tsara ny asany amin’ny fahalemem-panahin’ny fahendrena.
3:14 Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampian Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mirehareha na mandainga manohitra ny marina.
3:15 Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an’ny demonia.
3:16 Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mbamin’izay asa ratsy rehetra.
3:17 Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindrampo sy be voka-tsoa, tsy miahanahana na mihatsaravelatsihy.
3:18 Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin’ny fihavanana ho an’izay mampandroso ny fihavanana.
« Iza aminareo no hendry sy manam-pahalalana ? Aoka hasehony amin’ny fitondrantena tsara ny asany amin’ny fahalemem-panahin’ny fahendrena » (and13)
Hatrany amin’ny and 1 no miresaka momba ireo izay te- ho mpampianatra eo amin’ny Fiangonana i Jakoba .Mbola tohin’izany ity eto amin’ny and13 ity . Ny fahendrena sy fahalalana dia zavatra tsy afa-misaraka raha ny heviny izay asehony eto . Toetra tsy azo ajanona fotsiny izany fa indro ambarany izay ilàna izany.
1-Fitondrantena tsara manampy amin’ny asa tsara
Ny fotondrantena no tokony hodinihan’ny olona vao tokony hiroso amin’ny fanatanterahan ny asa. Ny asa izay lazaina eto dia ny asa fampianarana sy ny fitoriana ny Filazantsara .Paoly ihany koa dia efa nananatra ny Fiangonana ny amin’izany (Fil 1.27/1 Tes 2.12) , satria ny kristiana dia olona hitarika ny hafa ho ao amin’i Kristy .Ho takona ny asa tsara raha ratsy fitondrantena . Jesoa dia efa nanambara izany ao amin’ny Mat 5.16.
2-Asa tsara atao amin’ny fahalemem-panahy
Na tsara fitondrantena aza kanefa tsy mahay manetry tena fa feno fireharehana dia tsy mahasoa .Satria izay rehetra atao dia avy amin’ Andriamanitra . Na ny asa na ny hery hanatanterahana ny asa dia avy Aminy avokoa . Ilaina rahateo izany mba tsy ho takon’ny fahendrentsika olombelona ny an’ Andriamanitra .Jereo ny nataon’i Jesoa (vakio Fil 2.5-8)
Inona no toetra hamantaran’ny olona fa kristiana ianao?